Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Harry Winks nke nwata akụkọ akụkọ gbasara eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha "Obere Iniesta“. Anyị Harry Winks Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na -ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Nyocha a gụnyere ndụ nwata ya, ndabere ezinụlọ ya, akụkọ ndụ tupu ama ama, ebili na akụkọ ama ama, mmekọrịta, na ndụ onwe onye.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọmarịcha anya ya, obere etiti ya, na ụdị egwuregwu ya. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na -atụle Harry Winks 'Biography nke bụ ihe na -atọ ụtọ. Ugbu a n'atụghị egwu, ka anyị bido.
Akụkọ Harry Winks nke nwata - mmalite na ndụ ezinụlọ:
Malite, aha ya bụ Harry Billy Winks. Harry Winks dị ka ọ maara na a mụrụ na ụbọchị 2 nke February 1996 nye nne ya, Anita Winks na nna, Gary Winks na Hemel Hempstead, United Kingdom.
A mụrụ Harry na ezinụlọ hụrụ football n'anya. Nna ya bụ Gary bụbu onye egwuregwu bọọlụ ọkara ọkara nke na-egwu Hemel na Berkhamsted. Ezinụlọ Winks abụwo onye na-akwado Spurs ogologo ndụ ogologo oge kemgbe 1984 mgbe mmeri Spurs UEFA meriri.
Na-ekwu maka akụkọ ntụrụndụ ezinụlọ ma ọ bụ mmalite, Harry Winks sitere n'ezinụlọ ezinụlọ Spanish site na nne ya na nne na nna ya ochie. Otú ọ dị, obi dị ya ụtọ ịbụ onye Britain site n'aka nna ya. Harry toro na nwanne ya nwanyị aha ya bụ Milli, onye ọ na-echebe.
Ma na n'ụlọ ma ọ bụ ka ya na ụmụnne ya na-emekọ ihe, Harry na-ese onyinyo n'okpuru ebe a ga-achọpụta nwanne ya nwanyị dị ụtọ.
Taa, ọ dị mma ma dị mpako maka Milli ịhụ nwanne ya nwoke, ezigbo onye ọ bụla na onye ọlụlụ na mpụ na-enweta nnukwu ọganiihu bọọlụ.
Ugbu a dị ka n'oge edere, ọ nweghị onye nọ n'ụwa nwere njikọ siri ike nke kesara n'etiti Harry, Milli, na nne ha Anita.
Harry Winks Biography - Nrụpụta Ọrụ:
N'ikwu okwu banyere ịbụ onye na-agba Spurs, nna Harry bụ Gary kwuru n'otu oge, sị:
N'ezie, Harry bụ onye na-agba ọsọ Spurs, nke a na-amanye m n'aka ya!
Harry dị ka mama ya na nna ya Tottenham Hotspur onye ofufe ọbụna tupu ya amalite igwu egwu. Harry gara akpa egwuregwu mbụ ya na White Hart Lane mgbe ọ dị afọ isii.
Ịhụ ụdị nke Michael Carrick, Robbie Keane na Teddy Sheringham kpaliri ya ịmalite ịgba ọkpọ ọ bụla nke yiri bọl bọl.
N'ikwu okwu banyere nwa ya nwoke football football mgbe ọ bụ nwatakịrị, Harry Wink's mum Anita gwara Gazette otu oge:
"Ọbụna dị ka obere nwatakịrị Harry ga-egwuri egwu. Ọ ga-adọba ya n'ebe niile n'oge niile. Mgbe ahụ, ọ kwagara na bọl tennis. Ọ na-egwuri egwu na ụlọ niile, na-eme ka m gbaa ọsọ! "
Ọ bụrụ na ọ naghị egwu bọl bọlbụ ma ọ bụ n'ime ụlọ ezinaụlọ ya, a ga-ahụ Harry na ọ ga-ahụ ya nso site na posters nke David Beckham na Michael Owen.
N'agbanyeghị na Harry hụrụ Spurs n'anya, o kpebiri ka ya na uwe elu na uwe ogologo England wee kegide onwe ya. N'ileghachi anya na foto ya dị n'elu, ị ga -ahụ na ha bụ ihe jersey kachasị amasị ya.
Harry amachaghị na ọ ga-eyi ya otu ụbọchị. Dị ka n'oge ederede, England England Jersey dabara na ọ mara mma nke ukwuu.
Harry Winks Early Life with Career Football:
Enwere ike ịhụ ike Harry mgbe ọ dị afọ 5 mgbe nne na nna ya debara aha ya n'akwụkwọ ndekọ Ross & Andy's Soccer Camps.
Ọ gara n'ihu soro Echoes FC na Hemel Hempstead gwuo egwu ebe amara amara ya nke ọma.
A maara Harry dị ka onye nwere ezigbo ume na n'agbanyeghị nnukwu oghere ya, ọ ka ga-enwe ike ịchọta pitch ahụ.
Na mbido, Harry nwere agụmakwụkwọ bọọlụ mbụ ya na ụlọ akwụkwọ Cavendish a ma ama ebe ọ gụsịrị akwụkwọ na 11.
Harry Winks Biography - Ndụ mbido na Spurs:
N'ihi ike ya ijikwa bọọlụ ahụ dịka nwatakịrị, onye nkuzi ya na Ross & Andy's Soccer Camps tụrụ aro ka ọ gaa ule Tottenham Hotspurs.
Ọ gafere ma debanye aha ya na klọb ahụ. Ọbụna na agụmakwụkwọ Tottenham, ọtụtụ klọb ka na -agba ya akwụkwọ dị ka nwata.
Ndị nne na nna Harry bụ Anita na Gary chọsiri ike imesi ike maka ọtụtụ ịchụ aja Harry mere n'oge mmalite ya na Tottenham. Nke mbụ, dị ka onye na -eto eto, Winks tara ahụhụ site na mmerụ ahụ na -eto eto na nsogbu azụ.
N'agbanyeghị nke ahụ, onye isi ụlọ akwụkwọ McDermott nwere okwukwe na nwatakịrị ahụ dịka o siri mee ndị mmepe oge, dịka Kane na Andros Townsend. ọbụna Teddy Sheringham nwere mmasị na-eto eto Winks na Scott Parker pụta dị ka onye ndu.
Nnukwu Mkpebi ahụ ma Bilie Ebube:
iji nyefee ndụ ya na nrọ ya, Harry kpebiri ịhapụ ụlọ ezinụlọ mgbe ọ dị afọ 16 iji bie nso na ebe ọzụzụ Spurs. Mkpebi ahụ adịghị mfe maka ezinụlọ Winks. Dị ka mama ya Anita si kwuo;
Harry aghaghị ịgbanwe, n'uche. Ọ dị ezigbo mma, na ịkwapụ n'oge ahụ siri ike. Anyị atọ - mụ onwe m, Gary, na Milli guzoro ma bee akwa mgbe o mechiri ọnụ ụzọ n'ihu anyị.
Ndị mụrụ Harry ga -ahụ ya naanị otu mgbede n'izu. Dị ka Harry si kwuo, isi n'ụlọ ezinaụlọ gaa biri na ndị ọ na -ahụtụbeghị mbụ nwere ike bụrụ ihe kacha sie ike o mere na ndụ ya niile.
Harry gara biri na Southgate, mpaghara ime obodo nke ugwu London. Ọ nọrọ na otu di na nwunye mara mma aha ya bụ Lesley na Matt onye ụlọ ha dị nso na ebe ọzụzụ ndị ntorobịa Spurs. Na ihu ọma, Matt bụ onye nkuzi ịnya ụgbọ ala kuziri Harry ka esi akwọ ụgbọala.
Harry Winks Biography - Bilie na Ama:
Mkpebi Harry mere ịghọ ọkachamara apụtaghị n'echiche efu. Na 27 July 2014, ọ bịanyere aka na nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya na Tottenham mgbe ọ masịrị ya Mauricio Pochettino bụ onye na-ele vidio n'egwuregwu ya.
Pochettino hụrụ Harry dị ka onye ọkpụkpọ yiri ụmụnne ya Spanish Xavi na Iniesta.
Ọ lere ya anya dị ka onye dị iche na ndị etiti ya; Victor Wanyama, Eric Dier, Mousa Dembélé, na Moussa Sissoko.
Ememme mgbaru ọsọ mbụ nke Harry gosipụtara ka ya na Mauricio Pochettino enwewo nkwusi siri ike kemgbe ha zutere mbụ.
Na-awụ akpata oyi n'ahụ, Harry kpọkuru England n'agbanyeghị na ọ na-eme nanị anọ na-eme egwuregwu maka Spurs. Gareth Southgate weputara ya ekele maka ndekọ ya.
Harry Winks Ndụ Ndụ:
Ị maara?… N'ime ihe nkiri ọ bụla na -eto eto, nwa agbọghọ ahụ na -adabakarị maka ndị egwuregwu bọọlụ a ma ama. N'oge ụfọdụ na ndụ nwata nwanyị ahụ, n'ime ala, ọ na -enwekarị agụụ ịkpa onye ọkpụkpọ kpakpando.
O di nwute, ihe nkiri anaghị egosi anyị ọghọm nke mkpakọrịta nwoke na nwanyị ịgba bọọlụ. Nke a bụ naanị otu ihe kpatara Harry ji alụbeghị nwanyị n'afọ ndị mbụ nke ọrụ agadi ya.
Akụkọ mmekọrịta mbụ nke Harry bịara mgbe ọ dị afọ 22 (Julaị 2018) mgbe a hụrụ ya na nwanyị ihe ngosi eziokwu Britain, Rosie Williams onye bụ afọ 4 okenye. A hụrụ otu ụzọ ahụ ka ọ na-ahapụ ụlọ nkwari akụ 5, ụlọ nkwari akụ Shangri-La nke London.
Na foto ahụ, Harry pụtara na ọ bụ nwa amadi Rosie zuru oke ka ọ na -emegheere ya ụzọ.
Nke a bụ oge Rosie si na ihe ngosi eziokwu nke British Love Island pụọ. Ka ọ na -apụ na -acha odo odo mara mma, nwanyị Welsh ahụ ga -eyiri nwoke ọ masịrị ya ihe ngosi mara mma. Naanị oge ga -agwa ma Harry ga -akpọrọ ya dịka enyi nwanyị ma ọ bụ nwunye.
Harry Winks Ndụ Onwe Onye:
A mụrụ Harry ihere ma dị jụụ, ma n'akụkụ aka nke ọzọ, ọ nwere ike ịbụ onye nwere ume na onye siri ike. Dị ka e si hụ ya site n'oge ọ bụ nwata, Ọ bụ onye nwere ike ime mgbanwe maka gburugburu ebe obibi ma ọ bụ ike ọhụrụ ọ bụla gbara ya gburugburu.
Ị maara?… N'adịghị ka ụfọdụ ndị na-agba ụkwụ ụkwụ, Harry Winks adịghị enwe mmekọrịta chiri anya na ndị Fans. Nke a bụ n'ihi na a kwụghachiri ya ụgwọ ihe ọjọọ maka ime ezi ihe. Ugbu a, ka m kọọrọ gị ihe mere n'ezie!
Harry ama ama okụt ke kiet ke otu ndutịm ke Watford ke owo emi okodude ke ufọt ufọt kiet ke Watford.
N'ụzọ dị ịtụnanya, otu onye ahụ na-akpọ Nikhil Shah depụtara foto ya na mgbasa ozi mgbasa ozi nke na-ekpughe Winks na ịga clubbing n'agbanyeghị na ọ na-agwọ ọrịa.
Onye na-akwado ya gbalịkwara ịbanye na ya Anyanwụ iji kpaa maka irere foto nke nwere ike gabigara.
N'okpuru ebe a bụ foto nke ihe Nikhil Shah dị mfe ma nwee echiche ọjọọ dere mgbe ebugoro foto ahụ na akaụntụ Instagram ya.
Nke a na-akọwa ihe kpatara Winks anaghị etinye aka na Fans ọkachasị n'ebe ndị na-ezighi ezi. N'agbanyeghị mgbalị niile iji nweta ọnụ ala dị ọnụ ala, ndị Fans bibiri ya maka ịnwa ịpụ Winks.
A CoD Fan: Harry weere onwe ya na oku nke egwu egwu.
Harry n'agbanyeghị usoro ọrụ bọl ya na-arụsi ọrụ ike ka na-achọta oge iji gaa Ihe omume Oku. Maa amụma? ọ bụghị naanị ọkachamara egwuregwu CoD.
Harry adighi adi ogwu Hector Bellerin onye na-egwuri egwu CoD maka awa 30 n'izu. Ọkachamara egwuregwu ahụ mere nke ahụ n'agbanyeghị nzute ọzụzụ klọb chọrọ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akụkọ akụkọ Harry Winks Childhood yana akụkọ Untold Biography.
Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.